Jose Mourinho oo si cad u sheegay in David de Gea uusan kooxda ka tagi doonin | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jose Mourinho oo si cad u sheegay in David de Gea uusan kooxda ka tagi doonin
(12-2-2018)Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa wuxuu si adag kaga soo hor jeestay wararka ku aadan in goolhaayaha kooxdiisa ee reer Spain David de Gea uu ku biiri doono dhigooda reer Spain ee Real Madrid marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Real Madrid ayaa si xoogan u dooneysa inay lasoo saxiixato goolhayahan 27-jirka ah ee David de Gea xili ciyaareedka soo aadan, si ay kaga dhigato badalka Keylor Navas, maadaama aysan ku qancin saraakiisha kooxda Los Blancos qaab ciyaareedka ninkan reer Costa Rica xili ciyaareedkan.
Hadaba Jose Mourinho ayaa wax laga weydiiyay bixitaanka goolhaaye David de Gea kahor kulanka ay maanta booqan doonaan kooxda Newcastle United wuxuuna yidhi: “Ma waxaad aaminsan tahay koox dooneysa inay lasoo wareegto ciyaartoyda ugu fiican, in isla kooxdaas ay hadana iska fasaxeyso xidigaheeda ugu muhiimsan?, runtii waa waxaan suuragal noqon doonin”.
Tababaraha United Jose Mourinho ayaa sheegay in hadii ay kooxdiisu dooneyso inay ku tartamaan koobab, waa inay sii wadaan ciyaartoydooda ugu fiican.
“Hadii aad rabto in aad aado heerkaas, waxaad heysaa ciyaartoy soo jiidata ciyaartoyda ugu fiican sida Alexis [Sanchez], [Nemanja] Matic iyo Paul Pogba iyo sidoo kale.
De Gea, oo Manchester United uga soo biiray Atletico Madrid 2011kii, ayaa lagu qiimeeyay 18.9 milyan ginni, wuxuu kulankiisii 300aad u saftay United kulankii ay 2-0 kaga badiyeen Huddersfield Town horaantii bishaan.